“JEREO NGE ZAHAY E !” -
AccueilTresaka“JEREO NGE ZAHAY E !”
28/12/2016 admintriatra Tresaka 0
Nihetsiketsika tokoa ingahy Rajoelina mivady tato anatin’ny andro vitsivitsy te hampiseho hoe tsy rototra amin’ny resaka politika kanefa hita be izao fa tena paikady politika no ao ambadik’izany fihetsiketsehana izany. Inona moa izany ilay sary tian’i Mialy sy Andry Rajoelina ho hitan’ny olona? Tsotra fotsiny, te hilaza fa tsy tafiditra ao anatin’ireny fanakorontanana maro isan-karazany ireny, ary izany no antony tsy hitenenany na “A”aza.
Etsy an-danin’izany anefa ampirisihany hanakorontana hatrany ireo mpiara-dia aminy, ataony mihitsy izay handranitana sy hiantsiana ny fitondrana amin’ny alalan’ny fandikan-dalàna mba hirosoan’ny mpitondra amin’ny fisamborana ho fampiharana ny maha tany tan-dalàna an’i Madagasikara. Izy mivady kosa eo anatrehan’izany rehetra izany, miezaka mampiseho amin’ny olona hoe “madio” tsy misy pentina, sns.
Marivo tototra loatra ilay famitaham-bahoaka! Tokony ho fantatr’i Mialy sy Andry Rajoelina hoe tsy mitovy tamin’ny taona 2008 sy 2009 intsony ny Malagasy. Tamin’izany no azonareo mivady namidy tamin’ny kely foana ny vahoaka, tsy izany intsony no zava-misy amin’izao fotoana izao ary vokatr’izay fahadisoam-pijery izay no nahadiso paika tanteraka ny kolonely Lylyson sy Augustin Andriamananoro.
Alahelom-bahoaka maro no mitambesatra ao an-damosinareo mivady, adinon’i Mialy Rajoelina ve fa nahatratra 500 ny ain’olona nafoy ny faha-26 Janoary 2009 taorian’ny nitarihanareo mivady ny olona hidina an-dalambe! Orinasa sy tranombarotra aman-jatony no lasa lavenona tao anatin’ny indray mipi-maso! Niray tsikombakomba tanteraka tamin’i Andry Rajoelina nandritra ireny zava-doza nitranga teto amin’ny firenena ireny izany Mialy Rajoelina izany koa raha ho avy ny andro hitsarana iny raharaha 26 Janoary iny, dia tokony ho isan’ireo enjehin’ny Fitsarana ihany koa i Mialy Rajoelina. Izay aloha izany no paikadin’ireto mpivady ireto. Manadio tena mafy ary miezaka ny ho hitan’ny olona amin’izany fandiovan-tena izany. “Jereo nge zahay e !”
Sehatra iray mampandroso haingana an’i Madagasikara ny fambolena sy ny fanohanana ireo tantsaha mpamokatra, ary manana traikefa amin’ izany i Marc Ravalomanana. Tsy nisalasala noho izany ireo Injeniera malagasy misahana ny fambolena sy fiompiana, nilaza ...Tohiny
Fandikan-dalàna nataon-dRajoelina : Mitazam-potsiny ny CENI sy ny Governemanta
Ravalomanana Marc : Hanao amboletra Ravalomanana